COD-Wasiiro Somaliland ah oo Gaarey Jiidaha Iyo Puntland & Jabhadda Caarre oo Durba Gacanta.
November 30, 2018 puntlandnews Somaliland, Wararka Maanta 2
Puntlandnews.net (Laascaanood)-Muddooyinkii ugu dambeeyey xukuumadda Somaliland waxaa caqabado xoogan, kacdoono iyo dagaalo kaga furnaayeen gobolada Sool iyo Sanaag, waxaana middaasi u dheeraa dagaalka ay ku dhawaaqeen beelo degan gobolka Togdheer.
Wasiiro katirsan xukuumadda Somaliland ee madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa gaarey afaafta hore, waxaana xilligaasi lagu wargeliyey inay dhaqso kaga laabtaan deegaamadaasi haddii kale ay gacanta ku dhigaan Puntland iyo Jabhadda Caarre.
Hada cuqdadii baa Idin ha
Warka aad soo gudbiseen waa mid ay somaliland ku farxayso. Cinwaanka iyo warka aad gudbiseen waxay isku jiraan inta North pole iyo South pole isku jiraan. Hadaad been sheegayso been Puntland wax u tarta miyaad sheegtaan!!!!! Beenaalayaal aan waxba ka xishooneyn ayaad ku Caan baxdeen!!!!!